Thwebula WeatherBug 10.0.7.4 – Vessoft
WeatherBug – a isofthiwe ukubuka sezulu izimo zakamuva emhlabeni wonke. Isofthiwe uyakwazi ukubonisa ukwaziswa okuningiliziwe mayelana sezulu ne izinkomba lokushisa, umoya, umswakama, ingcindezi, imvula, njll WeatherBug ikuvumela ukubuka sezulu ngehora kanye masonto onke. Isofthiwe kwenza ukulandela ezingeni animated yokucindezelwa, iphesenti umswakama, umoya isiqondiso noma isivinini ebalazweni. Futhi WeatherBug iqukethe amathuluzi adingekayo setha okukhethwa kukho sezulu izidingo siqu umsebenzisi.
isibonisi enemininingwane yezinguquko zesimo
Ngehora futhi masonto onke sezulu
Ibonisa izimo zezulu emephini
Amazwana on WeatherBug:
WeatherBug Ahlobene software:
Ubuso bekhompyutha Ithuluzi ukubonisa ukusebenza uhlelo kanye ukudizayina desktop. Isofthiwe ikuvumela ukubuka izilungiselelo computer ezahlukene.
Abanye Ithuluzi for the ukuvala shaqa othomathikhi. Isofthiwe kwenza ukushintsha computer ibe izindlela ezahlukene yavala phansi isimiso.
English, Русский, فارسی, Magyar... WinBubble 2.0.3.7
Ubuso bekhompyutha System nokwenza Isofthiwe nokwandisa kanye nokusebenza Tuning of the system. Isofthiwe iqukethe amathuluzi anhlobonhlobo oyifisayo of the system futhi ushintshe izilungiselelo zokuphepha.
Ubuso bekhompyutha Isofthiwe for a design zakudala Windows menu. Futhi isofthiwe isekela inqwaba amathuluzi ezengeziwe ukuhlomisa imenyu.
English, Français, Español, Deutsch... OnTopReplica 3.5.1
English, Español, Deutsch, Italiano... Desktop Sidebar 1.05.116 beta
Ubuso bekhompyutha Isethi amawijethi ewusizo futhi informers for the desktop. Phakathi kwezinsimbi zomculo kukhona ikhalenda, Semisebenzi, impimpi zesimiso ukusebenza nokuningi.
Ubuso bekhompyutha Isofthiwe ukuhlela imifanekiso desktop by ngeenqhema ezigabeni ezahlukene. Isofthiwe kwenza oyifisayo ukubukeka block izithombe for nezidingo umsebenzisi.
Ubuso bekhompyutha Ukufinyelela ngokushesha futhi elula izicelo noma amafolda. Isofthiwe ikuvumela ukuba lula wanezela izinto iphaneli futhi ivumela ukuba bandise amathuba ngokuxhumanisa anezele.
English, Français, Español, Deutsch... RKill 2.8.4
Antiviruses Isofthiwe ukuthola sokuqeda inqubo yokusebenza kwe-malware, ukuthi kukhinyabeza ukuhlinzwa okuphelele unqulo wesi arab main.
Hambayo The lula ukusebenzisa isofthiwe kusukela inkampani IObit ukuphatha ngokuphepha amafayela nezinhlobo ezahlukene phezu iPhone and iPad Amadivayisi.
English, Español, Русский, Türkçe... JoyToKey 5.8.2
Emulators Isofthiwe sokulingisa umsebenzi mouse and keyboard usebenzisa joysticks udlala. Isofthiwe isekela ukucushwa kwe inhlanganiselazihlonzi of the ikhibhodi noma igundane futhi inikeza ukulingisa zabo osheshayo on the induku yokudlala.
Umhleli Audio An lula ukusebenzisa ithuluzi ukusebenza nge amafayela alalelwayo. Isofthiwe iqukethe iqoqo izici ewusizo futhi kungaba ukunweba nabo by yokuxhuma anezele.
English, Українська, Français, Español... Clean Master 1.0
System nokwenza Isofthiwe ukuhlanza uhlelo kusukela kumafayela residual sesikhashana. Futhi isofthiwe kwenza ukususa plugins ezahlukene kanye nezicelo.
Zokuham video Isofthiwe ukubuka ithelevishini yokusakaza evela emhlabeni wonke. Isofthiwe kuhlanganisa iziteshi eziningi zomhlaba TV iziteshi izinhlobonhlobo ezihlukene radio.